प्याडको मूल्य मात्र बढाउने कि महिनावारी शिक्षा पनि दिने? :: Setopati
सीता थापा असोज ७
'महिनावारी एक प्राकृतिक तथा साधारण प्रक्रिया हो, तर महिनावारी र सरसफाई होइन।' यो भनाइ बुझ्न नसकेका र बुझाउन पर्ने ८८% महिलाहरु यही नेपालमा बसोबास गर्दछन्।
लियो क्लब अफ काठमाडौँ, मनास्लुबाट प्रतिनिधित्व गर्दै टेकासँगको सहकार्यमा दुई वटा समूह मिलेर लगभग १०० जना महिला तथा किशोरीहरुलाई महिनावारीको विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं। अन्तरक्रियामा छलफल गरिएका विषयहरु यी नै थिए।
महिनावारी भनेको के हो? महिनावारी सरसफाई र व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ? महिनावारीको समयमा सरसफाई नगर्दा देखापर्ने समस्याहरु, महिनावारीको समयमा सरसफाई बाहेक खानुपर्ने पोषिलो खाना, महिनावारीको समयमा गर्नुपर्ने व्यायामको बारेमा सहजिकरण गर्दै थिएँ भने टेका भन्ने संस्थाबाट सैलजा दिदीले पुनः प्रयोग गर्ने प्याड वितरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
नेपाल बसोबास महिला समूहसँग जोडिएर काम गरेको यो दोस्रो कार्यक्रम थियो। कार्यक्रमको हलभित्र छिर्दाको रौनक छुट्टै थियो। कार्यक्रममा केही कुरा जान्न भनेर आउनेको लर्को पनि धेरै थियो। साना बच्चादेखि ६० वर्षका आमाहरुको समेत सहभागीता थियो। कार्यक्रम विस्तारै सुरुआत भयो। अगाडिको मञ्चमा लियो क्लबको अध्यक्षलगायत सोही वडाको प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्थ्यो भने पछाडि दिदीबहिनी, आमा र साना नानीहरु छरिएर बसिरहनु भएको थियो।
सैलजा दिदीको परिचयात्मक सुरुआतसँगै सहजिकरणमा जोडिएँ। मैले सबैजनालाई हामीले घरमा खाने रोटीको जस्तो आकार बनाएर बसौँ भनेर आग्रह गरेँ। एकैछिन मान्न गाह्रो भएको आभास भयो। फेरि मैले दाहोर्याएँ, हामी एउटा क्रियाकलापबाट आजको सिकाइमूलक कार्यक्रम सुरुआत गर्दैछौँ त्यसैले त्यो आकारमा बसौँ भनेर आग्रह गरेँ। सबैजनाले निर्देशनलाई सकरात्मक रुपमा लिनुभयो।
हातमा बल लिँदै आफ्नो परिचय र आफूलाई मनपर्ने तरकारीको नाम भन्ने र साथीलाई बल पास गर्ने भनेको थिएँ। मलाई घुमाइ-फिराई उहाँहरुले कस्तो खालको तरकारी बढी सेवन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न मन थियो। किनकि स्वस्थ पाठेघरको निमित्त हरियो तरकारी र फलफूलको धेरै नै आवश्यकता रहेको छ भन्ने ज्ञान बढाउन अपरिहार्य छ।
उत्तरमा मैले धेरैलाई मासु र आलु मनपर्ने र त्यही सेवन गरिरहेको पाएँ। कमै आमा तथा दिदीबहिनीको जवाफमा मनपर्ने तरकारी साग र काउली थियो। उत्तर सुनेर दुःख पनि लाग्यो किनकि मैले धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धानको लेखहरु पढ्दा महिनावारी दुखाइ प्रबल मात्रामा बढ्नुको कारण मासुको सेवन धेरै मात्रामा गर्नु र हरियो सागपात प्रशस्त नखानु हो।
मासुमा 'एराकिडोनिक एसिड' प्रशस्तै मात्रामा हुन्छ। जसले गर्दा प्रोस्टाग्ल्यानडीन हार्मोन बढी मात्रामा उत्पन्न भई पाठेघरलाई पर्याप्त मात्रामा तन्किन र फुक्न दिँदैन। तसर्थ पाठेघरको अङ्गहरुमा प्रशस्त मात्रामा रगत सञ्चालन हुन नसक्दा वरिपरि रहेको पेन फाइबरहरु प्रबल मात्रामा सक्रिय देखिन्छ र सहनै नसकिने दुखाइको अनुभव हुन्छ।
यसपश्चात् अन्तरक्रिया बढाउन मैले भारत र नेपालको अस्पतालमा काम गर्दा पाठेघरको समस्या भएको धेरै आमा, दिदीबहिनिहरु भेटेको थिएँ भन्नेबाट सुरुवात गर्दै गर्दा एकछिन अगाडि मात्र सुन्नै नसकिने होहल्ला यो वाक्य सुन्ने बित्तिकै सबै चुपचाप लागे। मैले सामान्य प्रश्नबाट सुरुआत गरेँ, महिनावारी भनेको के हो? हजुरहरुले यसलाई कसरी बुजिरहनु भएको छ?
एक मिनेटसम्म कोही बोल्नु भएन। म सबैको अनुहारमा हेरिरहेको थिएँ। आमा-दिदीहरु टुलुटुलु हेरिरहनु भएको थियो भने बहिनीहरुले अनुहार तल निहुँराउनु भयो। प्रत्येक महिनामा हुन्छ भन्ने जवाफसँगै एउटा आमाले मौन भंग गरिदिनु भयो। आमालाई धन्यवाद भन्दै म फेरि अर्को समूहमा बसेको तिर फर्किएँ।
सबैजनाले बेन्चमा बसिरहनु भएको एकजना म्याडमको अनुहारमा हेरिरहनु भएको थियो। आश्चर्य मानेर मैले पनि हेरीरहेँ। मैले पनि उहाँबाट उत्तरको अपेक्षा गरेँ तर दुर्भाग्यवश कुनै उत्तर आएन। एकछिनपछि थाहा पाएँ उहाँ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ। सबैले उहाँको अनुहारमा हेर्नुको कारण शिक्षक बोल्नुभयो भने हामी पनि बोल्थ्यौँ भन्ने पनि हुन सक्छ।
अर्को कारण भनेको अगाडि बेन्चमा लियो क्लबको पुरुष साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि होकि भनेर मैले 'तपाईंहरुले केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हामी सबै महिनावारी विषयमा काम गरिरहेका छौँ' भन्ने बित्तिकै ३ वटा उत्तर एकै पटक आयो। मलाई अलि सहज महसुस भयो, मनमनै खुसी भएँ। अब उहाँहरुको समस्या सुन्न पाउने भएँ जस्तो लाग्यो।
खेल तथा क्रियाकलापको साथसाथै सहजिकरणको लागि धेरै थरीका रंगिन तस्बिरहरु प्रिन्ट गरिएको फ्ल्यास कार्डबाट सेसन तयार गरिएको हुँदा विभिन्न तरिकाबाट सिक्ने सिकाइहरुलाई समेट्न सकेको अनुभव भयो। तेस्रो प्रश्न थियो, महिनावारी भएपछि के-के प्रयोग गर्नुहुन्छ? धेरैको उत्तर बाहिरबाट प्याड किनेर लागाउँछौँ।
थोरैको जवाफ थियो, थोत्रो टालो च्यातेर प्रयोग गर्छौँ। बजारमा प्याडको मूल्य बढीरहँदा ती दिनरात काम गरेर गुजारा चलाइरहेका दिदी र आमाहरुलाई हेरिरहेको थिएँ। अर्कोतर्फ पुरानो टालो च्यातेर प्रयोग गर्छु भन्ने दिदीप्रति पनि दया जाग्यो। अनि चिच्याएर भन्न मन लाग्यो, सरकार सित्तैमा प्याड दिन नसके पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्याड वितरण गरिदेऊ।
एउटा प्याड कति घण्टा प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा ७० प्रतिशतले ८ घण्टा भन्नुभयो, २० प्रतिशतले २ घण्टा र १० प्रतिशतले १ दिन भन्नुभयो। यो सुन्दा सामान्य लाग्छ। अहिले सबै महिलाहरु घरभित्रको काममा भन्दा बाहिरको काममा धेरै व्यस्त देखिन्छन् चाहे लेबर काममा होस् या ठूलो-ठूलो अफिसको काममा।
बिहान प्रयोग गरेको प्याड बेलुका परिवर्तन गर्न समेत धेरै गाह्रो छ। समय पाएकाहरुलाई परिवर्तन गर्न राम्रो शौचालय छैन जसले गर्दा पाठेघरको गुप्तांगदेखि प्रजनन प्रणालीलाई समेत असर गरिरहेको छ। एउटै प्याड ४ देखि ६ घण्टा सम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि ६ घण्टाभन्दा बढी प्रयोग गर्यो भने परजीविहरु वा जिवाणुहरुलाई मिल्ने वातावरणको कारण गुप्तांगदेखि प्रजनन् प्रणालीसम्म सङ्क्रमण देखिएको छ।
अधिकांश महिलाहरुले के सोच्नुहुन्छ भने थोरै मात्र रगत देखिएको छ, त्यसैले एकदिन अथवा एकदिन एकरात प्रयोग गर्दा खासै असर नगर्ला भन्ने खालको सोचले पाठेघरमा अनेकौँ खालको रोगहरु निम्ताइरहेका छन्। गनोरिया, पिसिओडी, भ्याजनाइटिसजस्ता रोगहरुको तस्बिर प्रिन्ट गरिएको फ्यास कार्ड देखाउँदा एकजना दिदी आत्तिनु भयो।
'आबुई! यस्तो खालको पो हुँदो रहेछ बाई समयमै ध्यान नदिए।' जसले के आभास दिलायो भने साँच्चै नै महिनावारी सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन अति नै आवश्यक छ। चाहे त्यो महिनावारी नभएको बहिनीमा होस् या पहिलो पटक महिनावारी भएको बहिनी होस्, बच्चा हुर्काउँदै गरेको महिला हुन् या बच्चा जन्माइसकेको महिलाहरु हुन्। लिंग, वर्गका आधारमा भेदभाव नगरी यो खालको जनचेतना दिन जरुरत छ।
सुरुमा समस्या सोध्दा नबोलेको समूहले सेसनको अन्तिम अन्तिममा पुग्दा प्रश्नको ओहिरो लगाए। धेरैको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्दागर्दै कतिपयको प्रश्नहरु समेट्न सकिएन। टेका भन्ने संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सैलजा दिदीले प्याड वितरण गर्दै गर्दा प्रशस्त हँसिला अनुहारहरु देख्न पाइयो। भित्रपट्टि नरम कपडा मजाले सिलाएको र बाहिर पोलिस्टर जुन पानी नछिर्ने क्वालिटीको प्याड देख्दैमा अत्यन्तै राम्रो थियो। प्रयोग गरिसकेकाहरुबाट सकारात्मक पृष्ठपोषण आइरहेको छ।
आफू स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले र चाहनाको विषयवस्तु पनि रहेको हुँदा सकेसम्म सबै ठाउँमा सबै उमेरका महिला दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई पनि महिनावारीको बारेमा सिकाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ७, २०७८, १८:१२:०६